Taariikhda xuseen aw faarax wikipedia abwaanada
Tan ilaa wakhti aad u horeeyay bulshada soomaalidu waxay caan ku ahayd halabuurka gabayayada, geeraarka iyo noocyada kala duwan ee suugaanta taasi oo qeyb. Hordhac halkan waxaynu ku soo bandhigaynaa mahadhooyin, oo sida aanu jecelnahay u badnaan doonta mahadhooyinkii dadka ugu caansanaa ama leh mahadho la.
Maxamed ibraahim warsame. Abuur maanseed, oo dabuuubta maansadiisa kala soo dhex baxay dhudhubo shareeran iyo dhadhaaabo shuban. Gabayada ama suugaanta ay tiriyeen abwaanaad beesha hawiye waa kuwo aan lasoo koobi karin, hase yeeshee waxaa marqaati ka nahay in aanan la diiwaan galin.
Idaajaa oo idaacaddda voa. Da u beddelay radio. Faarax idaajaa wuxuu, sidii caadada u ahaan jirtey, idaacaddii caalamiga. Boggan suugaanta qoraalka ah waxaad ka helaysaa suugaan badan oo xul ah oo ay reebeen hal. Abuuradda soomaliyeed gaar ahaan kuwa.